Nezvedu - BullyingCanada
BullyingCanada Inoita Musiyano
Vechidiki Vedu Vakakodzera Kurwira
BullyingCanada ndiyo yega sangano renyika rinorwisa kudheerera rakazvipira chete kugadzira ramangwana rakajeka revechidiki vanodheererwa. Zvakatanga sewebhusaiti yakagadzirwa nevechidiki yekuunza pamwe chete vana vanodheererwa nekupa ruzivo rwekudheerera - uye nzira yekumisa! - ikozvino ibasa rakazara rekutsigira 24/7. Pazuva ripi neripi regore, chero nguva, pwere, vabereki, varairidzi, uye vadzidzisi vanotibata nerunhare, mameseji, chat yepamhepo, uye email kuti vabatsirwe pamusoro pekuita kuti kudheerera kumire. Chikwata Chedu Chekutsigira chinoumbwa nemazana evazvipiri vakadzidziswa zvakanyanya.
Kusiyana kwedu kwakasiyana: BullyingCanada anomira neavo vanosvasvavirira rubatsiro kusvika tapedza kudheerera kwavo. Pachiitiko chega chega chekudheerera chinounzwa kwatiri, tinotaura nevechidiki vanodheererwa nevabereki vavo; vanodheerera nevabereki vavo; vadzidzisi, varairidzi, vanachipangamazano, uye vakuru vezvikoro; mabhodhi echikoro; mapurisa emunharaunda kana hupenyu hwemwana huchityisidzirwa; uye masangano emunharaunda kuti awane vechidiki mazano avanoda kuti vapore. Izvi zvinowanzotora pakati pemavhiki maviri kusvika kupfuura gore.
Isu tinopawo zvidzidzo zvekuchikoro nezve kudheerera uye mabhezari kuvadzidzi vanoshanda mukurwisa kudheerera.
BullyingCanada yakatangwa muna Zvita 17, 2006 naRob Benn-Frenette ane makore gumi nemanomwe, ONB, naKatie Thompson (Neu) ane makore gumi nemana apo webhusaiti yavakasika yakatanga. Vose Rob naKatie vakashungurudzwa zvakanyanya mumakore avo ekutanga uye kuchikoro chesekondari. Vakatsvaga rubatsiro asi havana kuwana rubatsiro kana rubatsiro rwemagariro evanhu kuti vapindire uye kuvadzivisa kutambudzwa kusingagumi. Saka vakagadzira BullyingCanada kubatsira vana vari kurwadziwa.
BullyingCanada yakabudiswa mumapepanhau, magazini, redhiyo, uye terevhizheni muCanada yose uye pasi rose mumitauro yakawanda-semu Globe uye Mail, Vaverengi Digest, Mubereki wanhasi, nezvimwe zvakawanda. Rob naKatie vese vakazivikanwa pachena kakawanda nekuda kwekuedza kwavo kusaneta.
Kuvaka zviwanikwa zvavaida sevana,
vavambi vedu vakura BullyingCanada kuva pfuma yenyika.
Katie naRob vakatanga BullyingCanada muna 2006, pavakanga vachishingirira kunyangwe kushungurudzwa kwakanyanya kwavo.
Kuda kupa zvinopfuura static sosi yeruzivo, Rob naKatie vakanyoresa BullyingCanada sesangano rekubatsira rinoshanda kuti vakwanise kupa mabasa akananga kune vechidiki vanoshaya.
Support Network Yakatangwa
Kuziva kuti kudheerera hakuteveri maawa ehofisi, BullyingCanada yakatanga mutsara wekutsigira we24/7/365 kuitira kuti vechidiki vakwanise kufona, kutaura, email, kana kutumira mameseji nevazvipiri vakadzidziswa zvakanyanya kuti vawane rubatsiro rwavanoda.
Sangana neVatangi Vedu
Kuunza hupenyu hwese ruzivo uye hunyanzvi kubasa revechidiki vanodheererwa nemhuri dzavo munyika yose.
Katie aiva nemakore 14 paakasangana naRob kuburikidza neshamwari yavo vose. Katie akanga amboshungurudzwawo zvakanyanya paaikura. Zuva nezuva aityisidzirwa norufu, aisekwa, uye aikuvadzwa mumuviri. Asina kuwana nzvimbo yakachengeteka kubva kune vaimutambudza, akapedza gore rake regiredhi 9 uye akabuda muchikoro chepamusoro zvachose.
Kuti abatsire vamwe vana vanodheererwa saivo, iye naRob vakatanga BullyingCanada muchimiro chewebhusaiti. Akanga asina ruzivo rwekupikisa kushungurudzwa asi akaramba achishungurudzwa kunyange mushure mezvo BullyingCanada webhusaiti yakatanga.
Iye naRob vakagovana basa reCo-Executive Director we BullyingCanada. Ndichiri kuvaka network yakasimba yekutsigira, Katie akapedza uye akagamuchira Ontario Sekondari Chitupa kuburikidza nekudzidza pamhepo. Akapedza kudzidza kubva kuSt. Lawrence College nechitupa chake cheCriminal Psychology and Behavior Certificate with Distinction. Iye zvakare ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) yakasimbiswa, sezvakaita Rob uye vese. BullyingCanada's Support Team vanozvipira.
Basa raKatie parizvino mu BullyingCanada inguva-yenguva, inopindura maemail uye zvikumbiro zvekutaura kubva kuvana vanodheererwa. Semumwe wevaratidziri vakati wandei, Katie anoita mashoma BullyingCanada mharidzo dzechikoro gore negore. Anoongorora zvakare mabhuku ane chekuita nekudheerera uye mhirizhonga.
Katie akapihwa zita rekuti Mukadzi Wegore kubva kuNorth Perth Chamber of Commerce, nzvimbo yedhorobha rake.
Co-Muvambi & Executive Director
Rob aive 17 mu2006 apo iye naKatie Thompson (Neu) vakatanga BullyingCanada.
Akaberekwa aine cerebral palsy, kufamba kwake kusingawanzoitiki kwakamuita chipfuro chekutambudzwa kusingagumi mumakore ake ose okuchikoro. Akasangana nekushungurudzwa mupfungwa uye mumuviri-kusanganisira kurohwa, kugumburwa, kusaidzirwa, kupfirwa mate, kudanwa mazita, kupiswa nemwenje wefodya, uye kukandwa pamberi pebhazi raifamba. Kudheerera kusingadzoreki kwakamuita kuti asakwanisa kuisa pfungwa dzake pabasa rake rechikoro, uye achirota zvinotyisa, dikita rousiku uye kutya. Akaedza kugumisa upenyu hwake kaviri. Akasvika achida rubatsiro asi haana kuwana nyaradzo mukusazivikanwa, kwekamwe kamwe chete parunhare.
Panzvimbo pokudzvinyirirwa, akakoka simba romukati. Asingadi kuti pave nomumwe mwana akasangana nezvaakasangana nazvo, akashamwaridzana naKatie Neu aiva nemakore 14 panguva iyoyo, aishungurudzwawo.
Pamwe chete, vakatanga webhusaiti iyo yakabereka sevhisi yenyika-yakagadzirwa nevechidiki sevhisi yaizotora rutsigiro kune hurefu hwakagadzira nhoroondo yeCanada. Pazera ramakore makumi maviri nemaviri, Rob akapihwa rukudzo rweNhengo muOrder yeNew Brunswick.
Iye zvino mumakore ake makumi matatu, Rob akavaka sangano rakasimba renyika, nerutsigiro rwaKatie. Anopindura achipindura mafoni ekubatsira, kutora uye kudzidzisa vanozvipira, kuendesa mharidzo dzechikoro uye anotonga ese ezuva nezuva ekutonga uye ekutsvaga mari.